Gịnị Ka M Ga-eme ka Ndị Mmadụ Lewe M Anya Ọma Mgbe Mbụ Ha Hụrụ M?
Teta! | Julaị 2011
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kirghiz Korean Lithuanian Malagasy Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Thai Tsonga Turkish Ukrainian Zulu
“Ihe niile na-aga nke ọma n’ajụjụ ọnụ a m bịara taa! O nweghị ihe ga-eme ka nwa amadị a chọrọ iwe m n’ọrụ chewe na ụjọ ji m. Kemgbe m bịara, m na-akpọ ya aha ya. O nweghị ihe ga-eme ka ọ ghara iwe m n’ọrụ!”
“Ọ̀ bụkwadị nwatakịrị a dere ihe niile a n’akwụkwọ o ji achọ ọrụ? Agaghị m anwa anwa wee ụdị onye a n’ọrụ! Ya na-eme otú a ugbu a m na-ewebeghị ya n’ọrụ, m wezie ya n’ọrụ, ebelebe ga-egbu.”
Buru ụzọ lee foto a e sere ebe a tupu ị gụọ ihe e dere n’elu. Ị̀ hụrụ ụzọ ihe atọ ga-eme ka e lewe nwa okorobịa a bịara ịchọ ọrụ anya ọjọọ?
● Azịza ha dị n’okpuru ebe a
1. Ọ bụghị ụdị ejiji ahụ ka o kwesịrị iji gaa ịchọ ọrụ. 2. Otú o si kwuo okwu adịghị mma (ọ na-akpọ onye ga-ewe ya n’ọrụ aha ya). 3. Otú o si eme gosiri na o nweghị nsọpụrụ.
KA E WERE ya na e nyere gị nri ị na-eritụbeghị. Awa ole ka i chere ọ ga-ewe gị iji mara ma nri ahụ ọ̀ ga-adị gị mma? O nwere ike ịbụ naanị ọnụ i detụrụ ya ga-eme ka ị mara ma e nye gị ya mgbe ọzọ ị̀ ga-eri ya. Ọ bụkwa ya ga-ekpebi ma ị̀ ga-erichadị nke e nyere gị enye.
Ọ bụ ụdị ihe ahụ na-eme mgbe mbụ gị na mmadụ hụrụ. Naanị tịnkọm tịnkọm ole na ole gị na onye ahụ nọrọ, ị ga-ama ụdị mmadụ onye ahụ bụ. Ihe ọzọ ị ga-ama bụ na ọ bụkwa mgbe ahụ ka onye ahụ ga-amata ụdị onye ị bụ.
Ị̀ na-achọ ọrụ? Ị̀ na-achọ onye ị ga-emete enyi ma ọ̀ bụ onye ị ga-alụ? Ihe nwere ike ikpebi ma ị̀ ga-enweta ihe ị na-achọ bụ otú i si kpaa àgwà mgbe mbụ gị na mmadụ hụrụ. Ka anyị leba anya n’ụzọ ihe atọ ị ga elerukwu anya ma gị na ndị ọzọ nọrọ, ka ị ghara ime ihe a ga-eji lewe gị anya ọjọọ.
1. Ejiji Gị
Ma ọ̀ dị mma ma ọ̀ dị njọ, nke bụ́ eziokwu bụ na ihe nwere ike iso ekpebi otú ndị mmadụ ga-esi na-ele gị anya ma ha hụ gị bụ ejiji gị. Ọtụtụ ndị anaghị achọ ịma otú ndị ọzọ ga-esi ele ejiji ha anya mgbe mbụ ha na ha hụrụ. Otu nwa agbọghọbịa aha ya bụ Clarissa, * sịrị: “Taa, ndị mmadụ na-eyi ihe sọrọ ha aga ebe a na-ere nri, ha anaghịkwa achọ ịma otú ndị ọzọ si ele ha anya.”
Nke bụ́ eziokwu bụ na ọ dị mma ka i yiri ákwà kwesịrị ihe ị na-aga. Dị ka ihe atụ, ụdị ákwà i yi gaa ịchọ ọrụ abụghị ụdị nke ị ga-eyi aga igwu mmiri. Ma, gịnị ka ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị maghị ụdị ákwà i kwesịrị iyi aga ihe ị na-aga? Ihe dị mkpa ị ga-eburu n’uche bụ na i kwesịghị ịna-emefe ihe ọ bụla ókè. Ọ bụrụ na ụdị ị ga-eyi edoghị gị anya, yiri nke ị ma nwere ike ikwesị ihe ọ bụla a na-aga aga.
IHE Ị GA-EBURU N’OBI. Ejiji ị na-eji na-agwa ndị mmadụ ụdị onye ị bụ.
“M gaa ememme ọ bụla ma hụ ndị jiri ejiji iberiibe, anaghị m achọ ịga ha nso. Naanị ihe m na-echeta banyere ha mgbe ahụ bụ ejiji ahụ ha jiri, ọ na-emekwa ka m lewe ha anya ọjọọ.”—Diane.
Baịbụl kwuru na i kwesịrị ịna-eyi “uwe dị mma n’anya,” nke ga-egosi na ị ‘na-emeru ihe n’ókè, nweekwa uche zuru okè.’—1 Timoti 2:9.
Jụọ onwe gị, sị: ‘Ákwà m yi ọ̀ dị mma n’anya ka m̀ dị ghara ghara ghara? Otú m dị ọ̀ ga-eme ka onye chọrọ iwe m n’ọrụ, onye m chọrọ imete enyi ma ọ bụ onye m chọrọ ịlụ lewe m anya ka onye na-enweghị “uche zuru okè”?’
Aro: Ọ bụrụ na e nwere onye ị ma maara otú e si eji ejiji nke ọma, gwa ya ka ọ tụọrọ gị aro otú ị ga-esi na-eji ejiji dị mma.
2. Okwu Ọnụ Gị
Ihe si gị n’ọnụ apụta ka mmadụ ga-eji ama ma ị̀ bụ onye okomoko ka ị̀ bụ onye obi ruru ala, ọ bụkwa ya ka a ga-eji ama ma ị̀ bụ onye na-esiri ihe ọnwụ ka ị̀ bụ onye na-anaghị achọ nsogbu. Ihe a ka ị ga-eburu n’obi ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka onye na-abụghị nwoke ibe gị ma ọ bụ onye na-abụghị nwaanyị ibe gị lewe gị anya ọma mgbe mbụ gị na ya hụrụ. Otu nwa agbọghọ dị afọ iri abụọ na anọ, aha ya bụ Valerie, kwuru, sị: “Ọ na-ewe m ezigbo iwe ma mụ na nwa okorobịa na-akpa nkata, ya ana-ekwu naanị gbasara onwe ya. E nwere ndị nke ọ na-abụ gị na ha na-akpa nkata, ha achọọ ka ị gwachaa ha ihe niile gbasara onwe gị ozugbo ahụ gị na ha hụrụ. Ụdị ihe ahụ nwere ike ịgbakasị nwa agbọghọbịa ahụ́, ya esi ebe ahụ pụọ.”
IHE Ị GA-EBURU N’OBI. Ndị mmadụ na-eji ihe i kwuru ama ụdị onye ị bụ, n’ihi ya, gbalịa hụ na ihe ha ga-ama banyere gị bụ ihe dị mma.
“Mụ na nwa okorobịa nọrọ, ana m achọ ka ọ kpaa àgwà otú o si akpa. Ụbọchị mbụ ahụ mụ na ya hụrụ dị ezigbo mkpa. Ọ bụrụ na mụ na nwa okorobịa na-akpa nkata, ya ana-achọ ihe ọ ga-ekwu achọ, ọ pụtara na ihe ọ chọrọ ikwu abụghị eziokwu.”—Selena.
Baịbụl kwuru, sị: “Ị ga-ekwu ihe na-adịghị mma ma i kwuwe oké okwu—n’ihi ya mara ihe, kpacharakwa anya n’ihe ị na-ekwu.”—Ilu 10:19, Contemporary English Version.
Jụọ onwe gị, sị: ‘Gịnị ka m ga-eme ka m ghara ịna-ekwu oké okwu ma ọ bụkwanụ na-agbachikarị nkịtị? Otú m si ekwu okwu ọ̀ na-eme ka ahụ́ ghara ịna-eru ndị mụ na ha nọ ala ma ọ bụkwanụ na-eme ka iwe na-ewe ha?’
Aro: Leruo anya ala mata ndị ma otú e si akpa nkata. Olee otú ha si eme ka nkata ha na ndị mmadụ na-akpa na-aga were were? Ì nwere ike ime otú ahụ ha si eme?
3. Otú I Si Eme
Ọ bụrụ na mmadụ na-ekwu na ya na-akwanyere ndị ọzọ ùgwù, ndị ọzọ ga-ama ma ihe ahụ ọ na-ekwu ọ̀ bụ eziokwu. Ihe a bụ ihe ọzọ ị ga-eburu n’obi ma ị na-achọ onye ị ga-alụ. Nwa agbọghọ aha ya bụ Carrie, sịrị: “Ọ bụrụ na onye ahụ na-emere ndị ọzọ ụmụ obere ihe, ndị dị ka inyere onye bu ibu aka, ọ na-egosi na onye ahụ na-akwanyere ndị ọzọ ùgwù. Ụmụ obere ihe ndị ahụ ka e ji ama onye na-asọpụrụ ndị ọzọ.”
IHE Ị GA-EBURU N’OBI. Otú i si akpa àgwà ga-eme ka ndị mmadụ mara ụdị mmadụ ị bụ. (Ilu 20:11) Olee ụdị onye ndị mmadụ ga-asị na ị bụ ma ha na-ahụ otú i si eme?
“A sị m kwuo, m ga-asị na ọ dị mkpa ka mmadụ na-ege ntị nke ọma. Onye na-akwanyere ndị ọzọ ùgwù anaghị anapụ mmadụ okwu n’ọnụ, ọ gwụkwala ma ọ̀ dị ezigbo mkpa na onye ahụ ga-eme otú ahụ.”—Natalia.
Baịbụl kwuru, sị: “Otú unu chọrọ ka ndị mmadụ na-emeso unu, na-emesonụ ha otú ahụ.”—Luk 6:31.
Jụọ onwe gị, sị: ‘M̀ na-akwanyere ndị mmadụ ùgwù? Otú m si emeso ndị mmadụ ihe ọ̀ na-egosi na m hụrụ ha n’anya? Ndị ọzọ hà nwere ike ịtụkwasị m obi? M̀ na-eji oge akpọrọ ihe?’
Aro: Gị na ndị ọzọ yie agba, gbalịa gawa ihe ahụ n’oge ka ọ ga-abụ e nwee otú ihe si mee, ị gaghị abịa n’azụ oge. Ekwela ka ndị mmadụ jiri ịbịa n’azụ oge mara gị n’ụbọchị mbụ gị na ha yiri agba!
Ma, e nwere ihe ị na-ekwesịghị ichefu: Na a sị gị mee ka ndị mmadụ lewe gị anya ọma mgbe mbụ ha hụrụ gị apụtaghị na ị ga-akpawa àgwà n’abụghị àgwà gị, ka a sịkwa na ị bụ ezigbo mmadụ. (Abụ Ọma 26:4) Kama, kpebie àgwà ọma ndị ị chọrọ ịna-akpa, gbalịakwa na-akpa ha, ka e jiri ha mara gị. (Ndị Kọlọsi 3:9, 10) Echefukwala na ọ bụ otú ị chọrọ ka ndị mmadụ si na-ele gị anya ka ha ga-esi na-ele gị anya. Ọ bụrụ na ilebara ejiji gị anya, lebakwara otú i si ekwu okwu na otú i si akpa àgwà anya, ọ ga-eme ka ndị mmadụ lewe gị anya ọma ma mgbe mbụ gị na ha hụrụ ma n’oge ndị ọzọ.
Ị gaa n’adres Ịntanet anyị bụ́ www.watchtower.org/ype ị ga-ahụ ihe ndị ọzọ a tụlerela n’isiokwu a bụ́ “Ndị Na-eto Eto Na-ajụ, Sị”
^ par. 15 Aha a kpọrọ ụfọdụ ndị n’isiokwu a abụghị ezigbo aha ha.
[Igbe/Foto ndị dị na peeji nke 30]
IHE NDỊ NA-ETO ETO IBE GỊ KWURU
“Mmadụ kwesịrị ilezi anya ma a bịa n’ime enyi. Achọpụtara m na otú ndị enyi m si akpa àgwà ka m si akpa àgwà. Ọ bụ ya mere m ji emete ndị ga-akụziri m ịkpa ezigbo àgwà enyi.”
“Ọ bụghị ego i nwere ma ọ bụ mma ị mara ga-eme ka ndị ọzọ bụrụ enyi gị, kama ọ bụ àgwà gị. Nke a bụ n’ihi na ọ bụ gị ga-ekpebi ụdị àgwà ị ga-enwe, ma ọ bụghị gịnwa ga-ekpebi ma ị̀ ga-ama mma ma ị̀ ga-enwe ego.”
[Igbe/Foto dị na peeji nke 30]
IHE NDỊ GA-ENYERE GỊ AKA . . .
● Ịmụmụ ọnụ ọchị
● Ikwe mmadụ n’aka nke ọma (ọ bụghị ịpịji onye ahụ aka)
● Ịdị ọcha
● Ile onye ị na-agwa okwu anya
[Igbe/Foto dị na peeji nke 31]
EMEFEKWALA YA ÓKÈ!
Na-ekwu okwu MA ekwuchila ndị ọzọ ọnụ
Jụọ ajụjụ MA ajụla ihe na-agbasaghị gị
Gị na ndị mmadụ dịrị ná mma MA achụla nwoke ma ọ bụ nwaanyị
Obi sie gị ike MA etula ọnụ
[Igbe dị na peeji nke 31]
IHE Ị GA-AJỤ NDỊ MỤRỤ GỊ
Mgbe unu hà ka m, olee ihe ndị unu na-eme ka ndị mmadụ lewe unu anya ọma mgbe mbụ ha hụrụ unu?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Gịnị Ka M Ga-eme ka Ndị Mmadụ Lewe M Anya Ọma Mgbe Mbụ Ha Hụrụ M?
Ọ Gbawara Ozugbo O si Post Ọfịs Pụọ
Ihe Mere Ụfọdụ Ndị Ji Eyi Ọha Egwu
Ò Nwere Mgbe Iyi Ọha Egwu Ga-akwụsị?
Ole Ndị Ka M Ga Na-akpa Nso?
Otú M Si Kwụsị Ime Ihe Ike
Ụzọ E Si Akpụpụ Ndị Ohu Ofesi N’oge Gboo
Egbugbere Ọnụ Gị Ọ̀ Bụ “Arịa Dị Oké Ọnụ Ahịa”?
Ihe Mere Ị Ga-eji Kpachara Anya n’Otú I Si Ekwu Okwu
Gịnị Mere E Ji Kpọọ Ezigbo Ndị Na-eso Ụzọ Jizọs Asị?
Chineke Ọ̀ Nọ Ebe Niile?
NDỊ NA-ETO ETO NA-AJỤ, SỊ Ò Nwekwadịrị Ihe M Dị Mma Ya?
NDỊ NA-ETO ETO NA-AJỤ, SỊ Gịnị Ka M Ga-eme ka Ndị Mmadụ Lewe M Anya Ọma Mgbe Mbụ Ha Hụrụ M?
Ụdị Dị Iche Iche Họrọ ụdị nke ị ga-ewere TETA! Julaị 2011
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ TETA! Julaị 2011
TETA! Julaị 2011
Gịnị Ka M Ga-atụ Anya Ya Ma M Lụọ Di Ma Ọ Bụ Nwaanyị?—Nkebi nke Mbụ
Gịnị Mere Papa M na Mama M Agaghị Ahapụtụ M Aka?
Mmadụ Ịbụ Onye A Ma Ama Ọ̀ Dị Njọ?
Wepụta nke Dị́ Naanị n'Asụsụ Ndị Ogbi O Nwere Adres Ịntanet Naanị Maka Iwere Ya